Soomaaliya: Weerar lagu hayo wariyeyaasha – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
(Nairobi) – Dowladda Soomaaliya iyo kooxda Islaamiga ah ee hubaysan ee Al-Shabaab ayaa waxay adeegsadaan xeelado xadgub ah, si ay saameyn ugu yeeshaan warbaahinta, Human Rights Watch ayaa sidaasi ku sheegtay warbixinta ay maanta soo saartay oo ku aaddan Maalinta Xorriyadda Safaaxadda Adduunka.
Dowladdu waa in ay qaaddaa tallaabo ay ku mujinayso sida ay uga go’an tahay in ay soo afjarto hanjabaadda iyo tacaddiyada ka dhanka ah wariyeyaasha ee ay geystaan ciidammadeeda ammaanka iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Baahida ay Soomaaliya u qabto warbaahin xor ah oo firfircoon ayaa muhiimad gaar ah waxay sii yeelanaysaa inta uu socdo hannaanka doorashada la qorsheeyay 2016.
Warbixinta oo ka kooban 74 bog, cinwaanna looga dhigay “Sida Kalluun ku jira Biyo Sumeysan’: Weerarrada lagu hayo Xorriyadda Warbaahinta Soomaaliya,” ayaa waxay diiwaan gelisay dilalka, hanjabaadda, iyo xarigga aan loo meel dayin ee lagu hayo wariyeyaasha tan iyo 2014. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo mas’uuliyiinta gobolka ayaa waxay xeelado kala duwan u adeegsadeen sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen warbaahinta, oo ay ka mid tahay xarig iyo in albaabada loo laabo warbaahin, hanjabaad, iyo mararka qaar dembi kusoo oogid.
Al-Shabaab ayaa bartilmaameedsata wariyeyaasha, taasoo qeyb ka ah duulaankeeda ka dhanka ah dowladda iyo warbixinnada ay kooxdu u aragto kuwo lid ku ah. Mas’uuliyiinta dowladda waxay ku guul daraysteen in ay si wax ku ool ah baaritaan ugu sameeyaan oo ay maxkamadeeyaan dadka mas’uulka ka ah tacaddiyada, taasi oo cabsi ku reebtay noolosha wariyeyaasha.
“Xorriyada warbaahinta waa in aanay dhibaato kale kala kulmin Soomaaliya,” waxaa sidaa tiri Laetitia Bader oo cilimi baare ka ah waaxda Afrika ee Human Rights Watch.
Hanjabaadda muddada badan jirtay ee Al-Shabaab waxaa dheer in dowladda cusub ay kordhineyso khatarta iyo caburinta ay ku hayso weriyayaasha xilli adeegooda aad loogu baahan yahay.”
Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay guuldareysatay rajadii laga qabay in maamullada cusub ee Muqdisho, Puntland iyo maamul goboleedyada kumeelgaarka ah ee dhawaan la sameeyay, ay cadaalada la beegsan doonaan tacaddiyada ka dhanka ah wariyeyaasha. Dowladda Federaalka ah ayaa un baaritaanno ku sameysay oo maxkamada dacwado ka geysay weerarrada la sheego in Al-Shabaab ay kula kacday wariyeyaasha, iyada oo ku tiirsan hay’adda sirdoonka qaranka, taasoo aanan lahayn awood sharciyeed oo ay howshaas ku fuliso, iyo maxkamada ciidanka militariga oo hannaankeeda dacwad oogga uu ka hooseeyo heerka caalamiga ah. Saddex qof oo loo haystay in ay wariyeyaal dileen ayaa lagu xukumay dil, waxaana la toogtay bishii Abriil, 2016-ka, sidaa oo ay tahayna Human Rights Watch ayaa aragtay khaladaad dhanka sharciga ah kuwaasoo minja-xaabiyay fursadihii ay eedeysanayaashu ku heli lahaayeen xukun cadaalad ah.
Ma jiro sarkaal ka tirsan dowladda oo la ogyahay in loo maxkamadeeyay ama loo ciqaabay weerarrada, hanjabaadda, si xun ula dhaqanka iyo xarigga sharci darrada ah ee loo geysto wariyeyaasha.
Bishii Janaayo, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa saxiixay xeer cusub oo saxaafadda ah, kaasoo caqabad dheeri ah ku noqon kara xorriyada hadalka, Human Rights Watch ayaa sidaa sheegtay. Inkastoo sharcigan ay kujiraan qodobo wanaagsan, haddana waxaa kamid ah qodobo xadidaya xoriyyada warbaahinta.
Sharciga cusub ayaa dhalin kara faafreeb dheeraad ah maadaama aanay wariyeyaashu aqoonsan karin ficillada dembiga keeni kara.
Hogaamiyayaasha dowladda Soomaaliya waa in ay si cad u cambaareeyaan weerarrada ka dhanka ah wariyeyaasha iyo shaqaalaha warbaahinta, waana in ay qaadaan baaritaanno degdeg ah, hufan oo dhexdhexaad ah, waxaa sidaa sheegtay Human Rights Watch. Waa in ay ogolaadaan in si buuxda oo furan looga warramo arrimaha khuseeya danaha bulshada iyo in ay wax ka bedelaan ama ay meesha ka saaraan shuruucda xakameynaya xuquuqda hadalka iyo saxaafadda.
Deeq bixiyeyaasha caalamka waa in ay dowladda Soomaaliya ku cadaadiyaan si ay tacaddiyada uga difaacdo wariyeyaasha, oo ay dib u eegis ugu sameyso shuruucda waafaqsan iyo in ay dowladda siiyaan kaalmo farsamo si loo xaqiijiyo dembi baaris xuquuqda ilaalineysa.
“Ballanqaadka ah in la wanaajinayo xorriyadda warbaahinta ayaa ah tallaabo wanaagsan, balse intaa kuma filna,” ayay tiri Bader.
“Maamulada Soomaaliya waxa ay u baahan yihiin in ay si firfircoon wax uga qabtaan tacaddiyada iyo hanjabaadaha dhinac kasta uga yimaada weriyayaasha, si ay howshooda ugu gutaan cabsi la’aan.”
Xarunta ugu weyn Taliska AMISOM ee Xalane oo xalay la duqeeyey.